Kheyraadka Xubinta - Qorshaha Caafimaadka Bulshada ee Washington - Faa'iidada Medicare
Bogga ugu weyn > Xarunta Xubinta > Kheyraadka Xubinta
Waxbadan ka baro qorshahaaga oo marin u hel dukumiintiyada iyo foomamka muhiimka ah.
Xarunta kheyraadka xubintaada waxay si dhakhso leh ugu helaysaa macluumaadka ku saabsan caymiskaaga. Halkan waxaad ku baran kartaa wax kasta oo aad u baahan tahay inaad ka ogaato adeegyada la daboolay ee qorshahaaga ah waxaadna ka heli kartaa bixiye caafimaad oo kuu dhow. Soo dejiso dukumiintiyada qorshaha, hubi caymiska daawada laguu qoro oo wax badan ka baro faa'iidooyinkaaga ka xubin xubin ahaaneed ee 'CHPW Medicare Advantage'.
U adeegso Nidaamyada Bixiyaha si aad u hesho dhakhaatiirta daryeelka aasaasiga ah, isbitaalada iyo takhasusyada kuu dhow.
Soo ogow haddii takhtarkaagu hadda ka tirsan yahay shabakadeena ama ka hel macluumaad ku saabsan beddelaad bixiyeyaasha daryeelka.
Guji si aad u daalacato Tusaha Bixiyaha
Baro wax badan oo ku saabsan caymiska dawada dhakhtarku qoro ee aan ku darno qorshooyinka Faa'iidada Medicare.
Soo ogow haddii aad dhab ahaan u baahan tahay caymis rijeeto oo aad dhex gasho liistadayada dawooyinka la daboolay, farmasiyada aannu doorbideyno iyo kuwo kale.
Dhagsii si aad waxbadan uga akhriso Caymiska Dawada Aan Qorayno
Raadi dukumiintiyada qorshaha muhiimka ah ee kaa caawinaya inaad ku ekaato maareynta daryeelkaaga caafimaad iyo sida ugu badan ee looga faa'iideysan karo qorshahaaga.
Dhagsii si aad u hesho dukumiintiyada qorshaha
Barnaamijka Kaabista Dakhliga Hoose wuxuu ku siinayaa caawimaad dheeri ah si aad u bixiso qarashka qorshahaaga daawada ee Medicare.
➔ Dhagsii si aad u ogaato haddii aad u-qalanto gargaar
Ixtiraamka aqoonsiga dhaqameed ayaa ah udub-dhexaadka qaabkeena daryeelka. Waxaan adeegsaneynaa adeegyada bulshada ee gobolka iyo degmada si aan uga caawinno xubnaha qabaa'ilka inay caafimaad qabaan.
Dhagsii si aad waxbadan uga akhriso adeegyada Caafimaadka Qabiil ee gobolka Washington
Taariikhda Ugu Dambeysa ee Cusboonaysiinta: Julaay 1, 2020